Ahoana ny fomba hamoronana maso maitso - Inona no loko tiako? | Bezzia
Ahoana ny fomba hamoronana maso maitso
Susana godoy | 08/06/2021 14:00 | Maquillaje
Hainao ve ny mamorona maso maitso? Izy ireo dia iray amin'ireo endrika manintona sy mahaliana indrindra. Marina fa ao anatiny io dia afaka mahita loko maitso isan-karazany koa isika, kanefa mbola mamela anao ny toro-hevitra tsara indrindra ihany koa izahay mba hihamafana kokoa ny masonao.
Raha hitanao fa manandrana ianao fa tsy mahazo ny vokatra andrasana, Homenay anao ny hevitra tsara indrindra hahafahanao mahazo tombony betsaka amin'ny fijerinao. Ny makiazy no mpiara-miombon'antoka akaiky indrindra amin'ny fotoana rehetra amin'ny andro sy ny alina ary hanampy anay hanamafy ny zavatra tadiavinay sy hanafina izay tsy tiantsika. Andao hidina amin'ny raharaham-barotra!
1 Ahoana ny fanaovana makiazy maitso tsikelikely
2 Inona no loko eyeliner ho an'ny maso maitso
3 Loko aloky ny maso maintso
4 Ahoana ny fomba hamoronana maso maitso ho an'ny fety
Ahoana ny fanaovana makiazy maitso tsikelikely
Ny fanaovana makiazy amin'ny maso dia iray amin'ireo dingana izay tiantsika indrindra hatao. Fa marina fa tsy mifanaraka foana araka ny noeritreretinay azy. Amin'ity tranga ity dia hamela anao tsikelikely handany fotoana kely ianao, noho izany, miasà!
Ilaina ny manamboatra ny hoditra. Noho izany, tadidio ny manosotra moisturizer kely ny tavanao ary aorian'izany, ny fototra na makiazy nofidinao ho an'io fotoana io. Raha ny hodi-maso no resahina, dia misy ihany koa primera sasany izay mety tsara ho an'ny aloka haka loko bebe kokoa ary haharitra kokoa.
Tsy maintsy izao misafidy alokaloka roa farafaharatsiny miloko mitovy. Ny maivana indrindra dia handehanantsika ny hodi-maso finday iray manontolo ary hifangaro tsara.
Miaraka amin'ny loko maizimaizina dia homentsika lalina kokoa ny faran'ny maso izay mankany amin'ny tempoly ary mampihatra azy io amin'ny valan'ny vala. Fa eny, amin'ity faritra farany ity dia hofafantsika izy mba tsy hisy tsipika.
Arakaraka ny hanatonantsika ny ranomaso no hihamaivana kokoa ny loko, ka navelantsika hihoatra lavitra noho izany ny faritany hafa noresahintsika.
Rehefa apetrakao ny aloka dia tonga ny fotoana mifidiana eyeliner. Mety ho pensilihazo na ranon-javatra izy ary miaraka aminy no hanoratantsika ny tsipika ambony, akaiky ny volomaso.
Amin'ny ampahany amin'ny ranomaso dia hanome sentra fanazavana isika. Kely dia kely, teboka kely fotsiny mba hanazavana indroa ny masontsika.
Amin'ny farany, tsy misy toy ny fampiharana mascara kely hanome feo bebe kokoa ny maso.
Inona no loko eyeliner ho an'ny maso maitso
Amin'ny maha eyeliner anao dia efa fantatrao fa afaka mahazo azy roa amin'ny endrika pensilihazo, ranoka na gel ianao. Marina fa tsy maintsy manaraka ny fampiononantsika foana isika. Na dia amin'ny gel aza dia tsy maintsy hafaintsika foana izy io mba tsy marihitra loatra. Saingy efa natao ho an'ny tsiron'ny tsirairay izany. Ny ataonao dia ny mijanona miaraka amin'ireo loko izay misongadina indrindra hahafantarana ny fomba fananganana maso maitso.
Ny loko mainty dia hanome hery azy io ary lavorary raha nisafidy 'Smokey Eyes' ianao. Io fomba mifoka sigara izay ho kintana amin'ny alina tsara indrindra sy hetsika lehibe io. Raha te hanana voajanahary bebe kokoa ianao dia afaka misafidy ny eyeliner maitso izay manasongadina ny fijery. Ny iray hafa amin'ny loko eyeliner izay tsy azonao adino dia ny volontsôkôlà. Ny manga sy ny volondavenona dia tsy tokony hatao.
Loko aloky ny maso maintso
Ahoana ny fomba hamoronana maso maitso ary aloka inona no mety aminy? Azo antoka fa mihoatra ny indray mandeha ianao no nanontany tena tamin'ny tenanao, koa, holazainay aminao fa marina fa ity lokon'ny maso ity dia afaka mitondra loko misy loko sy tonony isan-karazany. Saingy tianay izy ireo hamirapiratra bebe kokoa ary noho izany antony izany dia tsy misy toa izany ny feo volamena, izay alehan'ny volontsôkôlà dia iray amin'ireo hevitra tsara ho an'ny masonao. Fa ny mavokely koa dia iray amin'ireo mpiara-miasa sy volomparasy tsara indrindra. Marina anefa fa eo am-bavan'ny olona foana ity farany. Tsy noho izy tsy tonony tonga lafatra fa satria sarotra ny manambatra azy amin'ny fomba voajanahary kokoa.
Ahoana ny fomba hamoronana maso maitso ho an'ny fety
Hangataka fangatahana ianao aloka volondavenona maivana manerana ny hodi-maso.
Azonao atao ny manao ny mifanohitra amin'ny a aloky ny aubergine loko na mainty volondavenona. Handeha amin'ny zoro ivelany amin'ny maso izany ary hatrany afovoany, manjavozavo tsara.
Avy eo afovoan'ny hodi-maso mankany amin'ny lacrimal, dia mihamazava indray ny loko. Miaraka amin'ny kitapom-pahazavana ao amin'ny fantsom-dranomaso.
Mandalo borosy madio mba afangaro tsara ny hodi-maso iray manontolo, hisorohana ny volo.
Milahatra miaraka amin'ny alokaloka maizina ary asio mascara.
Fantatrao izao ny mamorona maso maitso hahafahanao mandray izany amin'ny fivoriana manaraka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » beauty » Maquillaje » Ahoana ny fomba hamoronana maso maitso
Tombony azo amin'ny fampiofanana fampiatoana